Haweeneydii nafteeda u hurtay inay dunida socod ku marto | Berberanews.com
Home Qubanaha Haweeneydii nafteeda u hurtay inay dunida socod ku marto
Angela Maxwell waxay go’aansatay inay keligeed dhex socoto dunida, si ay ay xidhiidh qoto dheer ula sameyso dunida ku hareereysan.
Kaddib safar qaatay lix sano iyo 20,000 oo meyl, waxay dalkeeda ku laabatay iyada oo wax badan ka fahansan adduunka.
Dadka ayaa aalaaba weydiiya Angela Maxwell isla su’aashan: “Sabab?”, ilaa iyo haatanna, haweeneydan Mareykanka u dhalatay ayaa waxaa ku adag inay sharraxaad ka bixiso sababta ay nolosheedii quruxda badneyd ugu rogtay mid qaxar badan iyada oo hiigsaneysa riyadeeda.
Balse Maxwell ayaa su’aashan u aragta mid jawaab mudan. Maxwell waxay gashay safar aysan dad badan xiiseyn lahayn. Sanadkii 2013, waxay go’aansatay inay keligeed dhan walba ugu socdaasho dunida.
Maxwell ma aysan qorsheyneyn inay dhulkaas fog u lugeyso. Balse maalin ayaa iyada oo joogta xarunteeda farshaxanka waxay maqashay nin dunida socod ku soo maray, sagaal bilood kaddibna waxay go’aansatay inay baxdo.
Maxwell kama aysan fekerin safarkan si ay uga baxsato xanuunka qof ay weysay amaba caqabado kale oo nolosha ah, balse markii ay go’aansaneysay inay dhulkan fog lug ku marto waxay markaas gashay da’da soddomeeyada, waxay lahayd ganacsi ballaaran waxayna heysatay nolol jaceyl ku dhisan.
“Waxaan u maleyn jiray inaan faraxsanahay, balse hadda marka aan dib u eego nolosheyda kahor inta aan safrin, waxaan arkaa inaan wax badan raadinayay, malaha waxaan doonayay inaan xoojiyo xiriirka aan la leeyahay dabiicadda iyo dadka si aan xiriir qoto dheer ula yeesho dunida igu hareereysan,” ayay tiri.
Maxwell waxay ogaatay in sida keliya ee ay arrintan ugu guuleysan karto inay tahay socod, taas oo yareyn karta doorka ay ku leedahay hawada kaarboonka, iyo sidoo kale inay si deggan u socoto inay ka caawin doonto inay dabeecadda dunida barato ayna la kulanto dadka ay mar walba gaariga ku ag mari jirtay, isla markaana ay wax ka barato dhaqankooda kuwaas oo ay keliya wax ka ogaadaan dadka safarrada dhaadheer lugta ku gala.
Maxwell waxay ka war heshay koox haween ah oo dunida socod ku mara kuwaas oo ku dhiirri geliyay riyadeeda.
Waxaan jecleystay qoraallada Robin Davidson, kaas oo Australia ku maray isagoo ku safraya rati.
Waxaan bartay Fiona Campbell, oo socod dheer geli jirtay. Waxaan akhrin jiray qoraallada Rosie Sewell Pope, oo Yurub ilaa Nepal ku maray gaari kaas oo istaajin jiray dadka waddada uga hor yimaada.
Iyadoo ay ka go’an tahay inay safarto, ayay Maxwell iibisay dhammaan alaabteedii wayna is diyaarisay iyadoo sii qaadatay waxyaabihii ay u baahneyd oo sahay ahaa.
Taariikhdu markii ay ahayd May 2, 2014, Maxwell waxay ka baxday deegaankeeda Bend, Oregon, iyadoo gashay safar aysan ogeyn wuxuu badi doono.
Markii qadka Skype lagula xiriiray Maxwell bishii June 2018, waxay ku jirtay afar sano oo safarkeeda ah iyadoo jartay 12,500 meyl isla markaana waxay booqatay 12 dal oo saddex qaaradood ku kala yaalla.
Mar wax laga weydiiyay sifooyinka qofka go’aansada inuu ku socdaalo daafaha dunida, waxay ku jawaabtay: “Go’aan adag.”
Waxayna inaas ku dartay, “Go’aankan wuxuu u baahan yahay hadaf, xoogaa ad adeyg ah iyo in xiiso uu kuu hayo, ma aha inaad uga dan leedahya jimicsi, balse waa inay kaa tahay ku qanacsanaan iyo jaceyl.”
Maxwell ayaa sheegtay in inkastoo ay maalinteeda ku bilaaban jirtay inay soo kacdo ayna ka laacdo labo koob oo qaxwo ah iyo baaquli shurbad ah, kaddibna ay socod isku diyaariso, habeenkiina ay teendhadeeda hagaagsato, cunto baasto fudud kaddibna seexato, haddana maalin walba way uga duwaneyd maalinta kale.
Maxwell safarkeeda kama marneyn caqabado, waxay ku dhex lugeyneysay cadceedda kulul ee saxaraha Australia iyadoo sidoo kale ku xanuunsatay Vietnam. Waxaa tacaddiyo u geystay isla markaana kufsadat nin reer-miyi ah oo teendhadeeda ugu tegay mar ay joogtay Mongolia, waxayna maqashay rasaas mar ay joogtay Turkiga, waxayna markii dambe seexan jirtay iyadoo aan indhaha isku qaban. Maxwell way fileysay inay la kulmeyso dhammaan caqabadaha noocyadooda kala duwan, inkastoo aysan ogeyn waxa ay noqon doonaan.
“Waxaan u soconayay ma ahayn inaan geesi ahaa, balse waan baqayay,” ayay tiri Maxwell. “Waxaan aad uga baqayay inaan dhegeysan wadnahayga intii aan ka baqi lahaa inaan lumiyo wax walba oo aan heystay iyo qof walba oo aan jeclaa.”
Kufsigii lagula kacay wuxuu ka mid ahaa waxyaabihii ugu adkaa ee soo maray, iyadoo markii dambe go’aansatay inay safarkeeda sii wadato. Inkastoo ay baqaysay, sheekooyinka haweenka kale ee go’aanka lahaa ayaa dhiirri gelinayay.
Waxaan go’aansaday inaan oggolaan in arrintan ay igu qasabto inaan ka haro riyadeyda oo aan dalkeyga ku laabto,” ayay tiri Maxwell. “Waxaan ka tegay dunideyda aniga oo aan waxba heysan waxaana garwaaqsaday khatarta safarkeyga.” Maxwell waxay u lugeyneysay inay ogaato sida ay u tahay qof ad adag marka ay la soo dersaan caqabado.
Waxay gaartay Badda Tyrrhenian ee Talyaaniga, iyada oo ku mushaaxeysa jawiga isla markaana ka aqbaleysa dadka inay wada fadhiistaan oo ay wada qaxweeyaan.
Dalka Vietnam, iyadoo daallan kaddib markii ay ka boodda buurta Hai Van Pass, haweeney da; ah ayaa salaantay kuna casuuntay inay la seexato muddulkeeda yare e ku yaalla buurta.
Waxay uga warbixisay xadka u dhaxeeya Mongolia iyo Ruushka iyo inay dib ula midowday saaxiibbadeed sanado kaddib Switzerland.
Haddii ay kulamadaas qaataan toddoba daqiiqo ama toddoba maalmoodba, Maxwell waxay mar walba niyadda ku heysay labo arrin, marka hore inay si taxadar leh u dhegeysato dadka si ay wax uga barato. “Socodku wuxuu i baray in wax walba iyo qof walba oo dunida saran inuu hayo sheeko uu la wadaago dadka kale, waxa keliya ee aan sameyn karnana waa inaan si fiican u dhegeysanno,” ayay tiri.
Safarkeeda, waxay sidoo kale ku baratay cunto Karin waxayna u sii gudbisay dad ku nool xaafad ku taalla Talyaaniga, dhaqashada shinnida oo ay ku baratay Jamhuuriyadda Georgia, iyo la macaamilidda geela oo ay ku baratay Mongolia. Maxwell waxay baratay muhiimadda uu leeyahay is kaashiga, iyadoo geedaha ku jari jirtay New Zealand isla markaana Talyaaniga ku quudin jirtay dadka derbi jiifka ah. Waxay beeralley u dhashay Talyaaniga ka caawisay inuu gurigiisa dayactir ku sameeyo.
Dhanka kale, Maxwell waxay lacag u uruurisay hay’ado aan dowli ahayn sida World Pulse iyo Hair Future Coalition, oo caawisa gabdhaha iyo haweenka da’da yar. Guud ahaan inta lacag ay uruurisay waxay gaareysaa $30,000.
Bishii December 16, 2020, Maxwell way soo afjartay socdaalkeedii, waxaan hab-nololeedkeedan uu u noqday mid ay mar walba ku laaban karto.
Maxwell waxay haatan qoreysaa bug si ay u qorsheyso safarrada mustaqbalka ayna u dhiirrigeliso haweenka.
Previous articleNatiijooyinka Hordhaca: Degmooyinka Caynaba, Balligubadle, Oodweyne, Baki iyo Ceel Afweyn
Next articleKenya: Askeri 17 maalmood ka dhuumanayay Shabaab oo la helay